Ezona fonti zeHippie zingcono | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | | Ihlaziywe 19/03/2022 15:29 | Ukuphefumlelwa
Masenze njengabalinganiswa abaphambili basemva kwiimuvi ezizayo, kodwa thina Siza kuhamba kwixesha elidlulileyo ukuze sikubonise ukhetho lweefonti zehippie.
Ishumi leminyaka yee-70s yayilinqanaba lembali elineentshukumo ezininzi zentlalo kunye neentsingiselo zenkcubeko ezinegalelo kwicandelo lobugcisa begraphic. Enye yeempawu zeli xesha yayiyi imfuneko yoluntu ukuba izivakalise ngeyona ndlela ibaxwayo, ngomculo, iimpahla kunye nobugcisa.
Intshukumo yeehippie yayiyenye yeendlela eziphawula eli xesha libalaseleyo kwaye oko kube nefuthe kwibala lokubonwayo.
1 70s impembelelo
2 iifonti zehippie
2.2 Kude kude
2.5 Intshukumo yeHippie
2.9 Ifonti eBold yeentyatyambo
2.12 Ihlobo lothando
2.13 ipokotho yesinqe
2.14 Belly Beads
Uyilo lwe-Typeface luye lwajikwa nge-360-degree, uyilo lwasuka kwisitayela semveli kude kube ngoku, kwaye ii-typefaces ze-retro zaqala ukuvela kwi-70s, ezotywe ngesandla, ulwelo kunye nohlobo lwamahhala.
Ngubani ongayikhumbuliyo imiqondiso yee-discos ze-70s, kunye nabanye ii-typefaces ezinkulu eziphantse zibe nobomi bazo, obuphefumlelwe zizibane ze-neon.
Ngeli xesha bazisa iindlela ezintsha zokuseta, njengeLetraset, amaphepha omgca kunye nezinye izinto ezidluliswayo, kunye neVisual Graphics PhotoTypositor, esebenzise imicu emikhulu yezinto ezingalunganga eziqulathe iimpawu. Zombini ezi ndlela zobuchule zinceda ukwenza inkqubo yokudlulisa iifonti ibe lula kwaye ingabizi kakhulu.
Ngeminyaka yoo-70 yabona imibutho eyahlukeneyo yentlalo kunye notyekelo, olwaluthandeka ukubonakala kweentlobo ezahlukeneyo zokuchwetheza. Ezi ntlobo zochwethezo zichumile kubalinganiswa bazo, zibaxa iiserif kunye neziphelo.
Ukuba cacileyo, yeyiphi eyona miba ibalaseleyo yolu hlobo lweefonti, nalu uluhlu lweefonti eziphenjelelwe zii-70s.
Yinto echwethezayo enika imbeko kwii-charms ze-70s. Abalinganiswa bayo banayo iphelela kwimilo ye-curl kwaye imiphetho yazo ingqukuva, inokusikhokelela ekubeni sikhumbule izihloko zeekhathuni ukususela ebuntwaneni bethu. Le fonti iza nekhathalogu epheleleyo yoonobumba abakhulu nabancinci.
Ifonti ephefumlelwe ngoo-70s, esibonisa ngoonobumba abanemiphetho engqukuva. Inempembelelo ecacileyo yentshukumo ye-hippie yaloo minyaka. Ukongeza, iqulethe uluhlu lwe Ii-icon ezingama-22 ezizotywe ngesandla ukongeza kuyilo.
Kule meko, yi- uchwethezo olunzima kunye nolumnandi oluqhelekileyo lwe-70s, iphenjelelwa ziintengiso ezibhalwe ngesandla. Ifonti enikezela ngeendidi ezahlukeneyo zeeleta zayo, inika uphawu olonwabisayo kubalinganiswa bayo.
Intshukumo yeehippie isemoyeni ngolu hlobo. Ukuchwetheza kunye noyilo olubanzi kwiimpawu zalo, ukongeza kwisiphelo esicacileyo kwiileta zayo. Kwabanye abalinganiswa bayo, sinokuyifumana izinto zokuhlobisa ngexesha lokugqiba ileta stroke.
Luhlobo lochwethezo onokulusebenzisa buqu kuphela. Yifonti egqibeleleyo yoyilo oluphefumlelwe ngelo xesha lembali. Ibonisa uluhlu olupheleleyo lwabalinganiswa, bobabini abancinci kunye nonobumba abakhulu. Kwakhona, a Into ehlekisayo kolu hlobo lochwethezo kukuba iimpawu zayo zomvandezo zizisimboli zoxolo.
Umbhalo wovavanyo owenziwe nguSergiy Tkachenko. Ngumthombo nabanye imivumbo engqindilili kakhulu kwaye engqukuva. Phakathi kwabalinganiswa bayo, unokubona iziphelo ezimbini ezihluke ngokupheleleyo, enye ingqukuva kwaye enye ithe ngqo. Ukongeza, udlala ngezinto zokuhlobisa ukunika umthamo kwiileta zakhe.
Ukuba le nto uyikhangelayo luhlobo lochwethezo oluphefumlelwe ziilebhile zelo xesha, le yi Alt Retro. lo mthombo, udlala ngemigca njengendlela yokwakha iileta zakhe. Ifaka iintlobo ezintlanu ezahlukeneyo zobunzima ukwenza uyilo olutsala amehlo.
Ukuchwetheza kokuzonwabisa kunye nesitayile seqamza esekwe kwi-70's. UGreta, uboniswa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo phakathi kwabalinganiswa bakhe, zizaliswe kwaye zibaliwe. Yindlela yokuchwetheza engaqhelekanga, ayingabo bonke abalinganiswa abafana, sifumana imivimbo eyahlukeneyo, amehlo anobumba kunye nokuphakama kwindawo nganye.
Ifonti eBold yeentyatyambo
Ukuba ujonge isimbo sohlobo lwehippie, apha sikubonisa omnye umzekelo owahlukileyo kowangaphambili. Umdibaniso ngoonobumba abanomgca ongqindilili kunye neentyatyambo ezibekwe ngobuchule kwiimpawu ezahlukeneyo.
Luchwethezo olujongeka njengerabha elastiki ngenxa yeemilo zayo. Yifonti yehippie kuyilo lwee-60s kunye no-70s. Abalinganiswa bayo, azilandeli indlela efanayo, kodwa nganye kuzo inentshukumo kwindlela yayo.
I-Hippie movement typography kunye nesitayela se-retro. UHippie Mojo, uneseti epheleleyo yabalinganiswa abathetha iilwimi ezininzi kunye neeglyphs, kunye nabanye abalinganiswa.
Yifonti enemivumbo engqukuva, eyenza imvakalelo ihippie zakudala. Luchwethezo oluqulunqwe ngoonobumba abakhulu kuphela.
Iifonti ze-Iconian zibonisa i-Hip Pocket, a Uhlobo lwehippie oluguquguqukayo kakhulu. Ineendlela ezili-14 ezahlukeneyo onokuthi ngazo unike umoya we-60s kuyilo lwakho. Luhlobo oluhlawulelwayo lokuchwetheza, kufuneka ufumane iphepha-mvume lokuyisebenzisa ngokurhweba.
Ngokusekwe kwintshukumo yeehippie, iBelly Beands yi-typeface odlala ngobukhulu babalinganiswa bakhe ngenjongo yokwakha umfanekiso ngokubeka oonobumba.
I-Aprilia typeface luyilo lolwama-70s kwaye yenye yezona zinto zikhumbulekayo kwinqanaba. Ngaba ngokusekelwe kwintyatyambo ye-Aberilla kunye nokumila kweepetali zayo, yiyo loo nto sifumana imigca egobileyo koolinganiswa befonti, eyenza uyilo lube ntle ngakumbi.
I-60s kunye ne-70s yayigcwele iimpembelelo zenkcubeko eziye zaphembelela iingcali zoyilo lwegraphic, ngenxa yokusetyenziswa kombala, uyilo lokuchwetheza okanye izitayile zemifanekiso, kuyo yonke le nto, oku. ixesha yenye yezona zikhunjulwa kakhulu kwihlabathi lobugcisa.
Siyathemba ukuba olu luhlu lweefonti ze-hippie ezingaze ziphume kwisitayile ziya kuba luncedo kuwe kwiiprojekthi ezizayo, oya kuthi ngazo unike ubuntu obukhulu kulo naluphi na uyilo. Zizintlobo zochwethezo ezingasoze zishiywe ngasemva, kuninzi phakathi konyaka ka-2014 kunye no-2015, babenokubaluleka okukhulu kwiwebhu kunye noyilo lwegraphic.
Ukuba ungumthandi wale ntshukumo, siyakumema ukuba ufumane isitayile osithandayo sokuchwetheza kweli xesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iifonti ezingcono kakhulu zehippie